सिधा कुरा जनतासंगका प्रोड्युसर दिपक र रबि बीच झगडाको बारे दुबैले यस्तो लेखे - www.dthreeonline.com
प्रकाशित मिति: शनिबार, आषाढ ०७, २०७६ समय: १७:४५:२७
ईटहरी/ सामाजिक सञ्जालमा एकाएक न्युज २४ का रवि लामिछाने र दिपक बोहरा बिच झगडा भन्ने शिर्षक सहितको समाचार भाइरल भयो । समाचार सामाजिक सञ्जालमा आए सँगै आफूहरु बिच कुनैपनि झगडा नभएको र झगडा होस् भन्ने कसैको चाहाना पूरा नहुने समेत दिपक बोहराले स्पष्टीकरण दिएका छन् । केही समय अगाडि दिपक बोहराले अब पत्रकारिता पुगे जस्तो लाग्यो भन्ने स्टाटस लेखेका थिए । सोही स्टाटसको आधारमा पनि भ्रामक समाचार आएको अनुमान सकिन्छ ।
यस्तै सिधा कुरा जनतासंग का संचालक रबि लामिछानेले पनि नेपाल आज अनलाईनमा प्रकासन गरिएको समाचारको स्क्रीनसट सहित फेसबुकमा यस्तो लेखेका छन्
“उहाँले मेरो फोन उठाउनु भएन।उहाँको वेबसाईटमै भएको नम्बर याहा राखेको छु। सभ्य शिष्ट भाषामा उहालाई सोधिदिनु होला,म कहिले याक एण्ड यति होटेल गए? एकै परिवारका दाजुभाइ जसरी मिलेर दिनरात सङै काम गरिरहेका मेरा सहकर्मीबीच कुटपिट भएको उहाले कहाँ देख्नु भएछ?उहाँसग प्रमाण मागि मलाई सहयोग गरिदिनु होला।उहाले मेरो फोन उठाउनु नै भएन अहिले off गर्नु भो।हामी अर्को हप्ता कार्यक्रमको ४०० भागको तयारीसगै कार्यक्रम निर्माणमा ब्यस्त छौ। उहाँ लगायत धेरै मित्रहरु प्रत्यक दिन केही न केही लेखेर खेद्ने तयारीमा हुनुहुन्छ।यस्तै हो पत्रकारिता? उहाँहरु जस्ताको एउटा ठूलो समूह छ जो अब जिन्दगी भर खेदी रहने प्रण सहित लाग्नु भएको छ।कसैको जुठो खाएर यस्तो झुठो समाचार लेखि सकेर घर गएर आफ्ना सन्तान र बा आमाको आँखामा आँखा जुदाउन कसरी सक्नुहुन्छ?छि .. यस्तो काम गरेरपनि के खानु? अनि आर्यन तामाङ भनिने अनिल तामाङ जी.. मध्य रातमा प्रहरिको कुटाई खाएर रिपोर्टिङ गर्ने मरो रिपोर्टरलाई तपाईंले लगाउनु भएको आरोपका बारे तपाइँसङ लाईभ कुरा गर्न ४ पटक कल र म्यासेज गरि सके। न भाग्नुहोला,आज लाईभ कुरा गरौ।अथार्थ सुनेर जिब्रो टोक्ने कि हामीलाई गरेको गाली गलौज सहितका कमेन्टहरु मेट्ने,आजको कार्यक्रम पछि निर्णय लिनुहोला। #अतिभो”
यस्तो छ सामाजिक सञ्जालमा आएको भ्रामक समाचार :
काठमाडौं । ‘न्युज २४’ टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने चर्चित कार्यक्रम ‘सीधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रमका प्रस्तोता रबि लामिछानले सोही कार्यक्रमका प्रोड्युसर दीपक बोहोरासँग कुटाकुट गरेका छन् । यो घटना जेठ महिनाको सोमबार रातिको हो । होटल याक एन्ड यतिमा एक कार्यक्रमका दौरान रबिले एकोहोरा दीपकलाई कुटेको शंका पनि गरिन्छ । दुई बीच झडप भए पनि उनीहरुको बाहिरी हालत भने ठिकठाकै भएको बुझिन्छ । यो घटनापछि निकै निराश भएका ‘न्युज २४’का पत्रकार जागिर छाड्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । उनले हालै आफ्नो फेसबुकमा लेखे, ‘पत्रकारिताबाट पुग्यो जस्तो लाग्यो । अब फेमिली बिजनेस, फेमिली टाइम…।’ यसको अर्थ दीपकले रविकै कारण जागिरबाट हात धुनु पर्ने अवस्था आएको बुझिन्छ ।
कार्यक्रम सीधा कुराको लोकप्रियता क्रमशः खस्किदै जानु र विवादमा पनि फस्दै गएका कारण रवि आफै पनि तनावमा रहेको निकटस्थहरु बताउँछन् । कार्यक्रम सीधा कुरामा असत्य र भ्रामक विषयवस्तु पनि उनले पस्केका थिए । आँखा पट्टी लगाएर पनि एक बालकले कुनै पनि वस्तुको रङ र कागजमा लेखेको छोएकै भरमा पत्ता लगाउन सक्छन् भनेर त्यो प्रकरणलाई अद्भूत क्षमता भनेर रबिले समाजमा भ्रम छरेका थिए ।
यर्थार्थ ती बालकले नाकको दुई साइडबाट हेरेर त्यो सबै गर्थे । टुँडीखेलमा राखेर भ्रष्टहरुलाई नाकको डाँडी भाँच्ने चाहना रहेको पनि उनले बताएका थिए । जुन निकै विवादास्पद भएको थियो । अमेरिकामा हुँदा एक नेपाली अभिनेत्रीसँग लिभिङ टुगेदरमा बसेको, अमेरिकी महिलासँग अवैध सन्तान उत्पादन गरेको, भएकी पत्नीलाई डिभोर्स दिएर कान्छी बिवाह गरेको भनेर पनि उनको आलोचना भएको थियो ।